बर्षालाइ दशै कती फाप्यो ? « Mazzako Online
बर्षालाइ दशै कती फाप्यो ?
अभिनेत्री बर्षा राउत अहिले प्रेमी संजोग कोइरालासँग रारा पुगेकी छिन् । दशैको रमझममा यो जोडी भने आन्तरिक पर्यटकको रुपमा रारा पुगे । रारामा बर्षा र संजोगले विभिन्न तस्बिर पोष्ट गरेका छन् । यो दशै अभिनेत्री राउतका लागि विशेष रहन पुग्यो । उनी, अभिनित फिल्म ‘छक्का पन्जा २’ असोज ११ गतेबाट हलमा रिलिज भएको थियो ।
यो फिल्मले बम्पर व्यापार गरेको छ । फिल्मको कमाइले बर्षा पनि फुरुङ् छिन् । तर, यो फिल्ममा बर्षा नभएको भएपनि यसले यस्तै व्यापार गर्ने पक्का थियो । तर, फिल्मको कलाकार हुनुको नाताले बर्षा खुशी हुनु स्वभाविक नै हो ।
यो दशैमा बर्षा अभिनित दुइ फिल्म एकसाथ रिलिज भएका थिए । ‘मेरो पैसा खोइ र छक्का पन्जा २’ । तर, हतारमा रिलिज भएको फिल्म ‘मेरो पैसा खोइ’ चलेन । तर, पनि बर्षालाइ यसले खासै असर भने गरेन । दशैमा फिल्म चलेपछि बर्षा रारामा रमाएको प्रष्ट हुन्छ ।